Shirkii arimaha Soomaaliya ee Istanbul oo ay ka hadleen hogaamiyaal kala duwan – SBC
Shirkii arimaha Soomaaliya ee Istanbul oo ay ka hadleen hogaamiyaal kala duwan
Posted by editor on June 1, 2012 Comments
Maalinta labaad ayuu galey shirka arimaha Soomaaliya ee ka soconaya magaalada Istanbul ee wadanka Turkiga kaasi oo looga hadlayo arimo ay ka mid yihiin siyaasada, amaanka, dib u dhiska dalka, gargaarka, dib u heshiisiinta iyo dhameynta waqtiga kala guurka.
Shirka maanta waxaa soo xaadiray madax ka socotey 54 dawlado iyo ururo kala duwan, waxaana si wadajir ah u shirgudoominayey Ra’isalwasaaraha Turkiga Mr. Recep Tayyip Erdoğan & xoghayaha guur ee Qaramada Midoobay Mr. Ban Ki-Moon, waxaana looga hadli doonaa Siyaasada, amaanka iyo horumarinta dhaqaalaha, waxaana la filayaa in ugu dambeynta shirka laga soo saaro warmurtiyeed.
Xognhayaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-Mon oo ka mid ahaa madaxdii shirkii maanta hadalada ka jeedisay ayaa wuxuu ka haldey arimo kala duwan oo la xiriira dhmaadka waqtiga hay’ada dawlada KMG, amaanka, hanaanka nidaamka cusub ee badalaya dawlada haatan jnirta.
Ban Ki-Moon wuxuu sheegay in ay tahay lagama leexdaan in waqtiga hay’ada dawlada KMG Soomaaliya uu ku egyahay 20-ka bisha August, waxaana uu sheegay in Soomaalida looga baahan yahay inay isu taagaan sidii mushkiladooda ay uga bixin laaheeyn, isagoo xusay in beesha caalamka kaligeed aanay wax ka qaban karin xaalada Soomaaliya.
Xoghayaha guud ee qaramada midoobay wuxuu ugu baaqay beesha caalamka inay ku gacan siiyaan Soomaalida sidii ay u dhisan lahaayeen ciidamadooda amaanka & sameynta sharci xukun.
“Xaqiiqdii argagagixisnimada, burcad badeeda iyo abaarta Soomaaliya waxay u baahan tahay iskaashi” ayuu yiri Ban Ki Moon oo farta ku fiiqay in beesha caalamka geesteeda ay qaado iskaashigaasi.
Ban waxaa kale oo uu ugu baaqay madaxda Soomaalida inay ilaaliyaan xuquuqda aadanaha, inay ka dhabeeyaan hindisaha ah in 30% xubnaha Baarlamanka ay noqdaan haween, inay dhawraan xuquuqda madaxbanaaninada fikirka, badbaadada saxafiyiinta, isagoo soo qaatey in wariyihii la diley bishii hore ee May uu ka dhigayo lix wariyaasha lagu diley Soomaaliya sanadkan oo kaliya.
Madaxweynaha dawlada KMG Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo kulanka khudbad ka jeediyey wuxuu ugu horeyn muujiyey sida Soomaalidu ugu baahan tahay in lagu gacan siiyo dhismaha ciidamada xooga dalka Soomaaliyeed, ayna u baahan tahay Soomaaliya tababar ciidankeeda loo sameeyo.
“Waxaynu u baahanahay inaynu helno qaab dhismeed dawladeed oo rasmi ah, hawlahan ma ahan kwua fudud waayo waxaynu wajahaynaa dhibaatooyin culus gaar ahaan argagaixisada oo wali sii wada hawlahooda, iyadoo sidoo kale dagaaladu iyo xiisadaha socda ay naafeynayana waqtigan kala guurka ah” ayuu yiri madaxweyne Shariif Sheekh Axmed.
Ra’isalwasaaraha Kenya Raila Odinga wuxuu soo qaatey arimo ku aadan guulaha laga gaaray dagaaladii ugu dambeeyey ee lala galay Al-Shabaab, wuxuu xusey in waa sida hadalka uu u dhigaye maleeshiyaadka Al-Shabaab ay u firxadeen dhanka buuraha Puntland, wuxuuna sheegay in jilicsanaanta awooda ciidan ee Soomaaliya ay leedahay ay keeni karto in ay dib isu soo abaabulaan kooxda Al-Shabaab, iyagoo isku dayaya inay dib u qabsadaan “goobaha la “xoreyeey.
Shirkan waxaa kale oo lagu wadaa inay ka hadlaan madax kala duwan oo ka socda dawladaha iyo ururada shirkan ka qayb galaya, waxaana ka mid ah kaaliyaha xoghayaha arimaha dibada Mareykanka Asistant Secretary Johnnie Carso, wasiirka arimaha dibada Talyaaniga Giulio Terzi, xoghayaha arimaha dibada Britian William Hague, xoghayaha guud ee ururka wadamada Islaamka ee Organisation of Islamic Cooperation (OIC), Ekmeleddin Ihsanoglu; Gudoomiyaha Midowga Afrika Chairperson of the African Union (AU) Commission, Jean Ping.
Warar dheeraad ah iyo dadka kale ee shirkaasi ka hadley kala soco SBC Insha ALAAH.
Leyla Cismaan Jaamac
SBC International Istanbul